Shiinaha L Taxanaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida iyo Soo-saaraha | MIT
Barxadku wuxuu sameyn karaa wiish jilicsan, kaas oo hubiya noocyada kala duwan ee gawaarida shilalka inay ka soo degaan oo ka dagaan madal aan wiish lahayn.
* Nidaamka kantaroolka dhexe ee madaxa banaan: hal gacan ayaa kor u qaadi kara korna u qaadi kara masraxa, soo jiidi kara munaaradaha, iyo wiishka sare. Si fudud ayaa loo shaqeeyaa oo waxtar u leeyahay.
* Barxadku wuxuu sameyn karaa wiish jilicsan, kaas oo hubiya noocyada kala duwan ee gawaarida shilalka inay ka soo degaan oo ka dagaan madal aan wiish lahayn.
* Minaaradaha Haydarooliga ee giraan-qaabeeya waxay hubinayaan in 360 ° wareegayo. Dhululubbooyinku waxay bixiyaan jiiditaan xoog leh iyadoon xoog lagu kaxayn.
* Qalabka isku xidha ee Vise ku leh T28 handarraabbadeedii ayaa si dhakhso leh oo adag u hagaajin kara baabuurta. Qalabkeeda cufan ee cufan waxaa lagu habeeyay gawaari badan, oo ay ku jiraan nooca goonnada iyo nooca dogob.
* 12 silsilado waara ayaa xaqiijiya xoog iyo badbaado sare.
* Qalabka jiidaya ee waajibaadka saaran waxay la jaan qaadayaan nooc kasta oo isku toosin ah.
* Nidaamka kontoroolka dhexe ee gabi ahaanba kuxiran wuxuu hubiyaa awood xoog leh, heerka guuldarada yar.
*Giraangiraha istaaga ayaa munaaradaha si fudud u dhaqaajinaya. Qalajiyaha gudaha qalabka dusha sare ka dhigayaa mid adag oo waara.
*Xoojinta dheeraadka ah ee ka jirta gudaha barxadda waxay hubisaa adkeysiga muddada-dheer. Nidaamyada kala duwan ee cabbiraadda korantada ayaa la jaan qaadi kara, taasoo ka dhigaysa barxadda mid wax ku ool ah
Ugu badnaan Awood jiidaya (munaarad)
Awoodda bamka korontada
380V / 220V, 3beesho
Fasal / xoogaa B fasal ah
Hore: M Serires Qalabka Toosinta ee Jirka
Xiga: M1000 Taxanaha Qalabka Tooska ah ee Jirka